Ikekwe ị nụtụrụla Egwuregwu, dị ka e mere baptism a na aha onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na onye agha nke Roman Republic. Ma ọ bụ ikekwe ị bịara n'isiokwu a na-achọ ozi ndị ọzọ n'ihi na ị matala ya ma chọọ ịmalite iji ya.
Dika odi, aga m anwa inye gi igodo banyere ihe Espurino bụ na ihe ọ nwere ike imere gị maka ọrụ gị n'ọdịnihu, yana ụfọdụ aro iji mụta otu esi ahazi ya n'ụzọ dị mfe.
Obere oge gara aga anyi gwara gi banyere Anaconda, Ihe ọzọ na-atọ ụtọ maka ndị hụrụ Python n'anya bụ ndị chọrọ nhazi oge mbadamba arduino site n'asụsụ mmemme a nke na-ewu ewu. Ihe yiri ihe ọ na-eme micropython, ma na nke ugbu a, ya na Espurino, ọ na-ewetara gị ohere ọhụụ ọhụụ site na iji asụsụ dị iche iche ...
1 Gịnị bụ Espurino?
2 Mpempe akwụkwọ Espurino
Gịnị bụ Espurino?
Emepụtara ọrụ Espurino Gordon Williams na 2012, dị ka ịnwa ikwe ka mmepe nke microcontrollers na ọtụtụ nyiwe. Na mbu, ọ bụghị oghe oghe, ọ nyere naanị nbudata ngwa ngwa n'efu maka STM32 MCUs.
Na 2013 oru ngo a ga - ewere ezigbo mkpa oghe emeghe mgbe emechara ego ịga nke ọma na Kickstarter crowdfunding platform. Mgbasa ozi a gafere gburugburu mmepe mbụ, na-achọ ego iji rụpụta bọọdụ nwere ike ịkwado sọftụwia a.
Enweela ikikere nke Espurino ugbu a n'okpuru ikikere Mozilla Public License 2.0, ebe koodu nlele dị n'okpuru MIT License, akwụkwọ dị n'okpuru Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0, yana faịlụ nhazi akụrụngwa n'okpuru nke a.
Nke a bụ otú Baajị gọọmentị nke Espurino, nke ga-esochi ya ọtụtụ nsụgharị nke nsụgharị ndị ọzọ dịka o mere na ọrụ ndị ọzọ yiri ya dịka Arduino. Na mgbakwunye, bọọdụ ndị a gosipụtara ndakọrịta maka ọta Arduino dakọtara, nke na-enye ha ikike na-atọ ụtọ n'ezie maka ndị na-eme ihe na ndị na-eme N'onwe Gị.
Ugbu a oru ngo nwere ụfọdụ ewu ewu, na ihe dị mkpa obodo mmepe na ọtụtụ nkuzi na enyemaka ị nwere ike ịchọta na Internetntanetị. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ JS na microcontrollers mmemme, ọ dịbeghị mgbe ị dị mfe ...
Usoro ọrụ ngo - GitHub
Ebe nrụọrụ weebụ Weebụ - Egwuregwu
Femụwe - Budata (maka efere dị iche iche)
Un microcontroller, a na-akpọkwa MCU (Micro Controller Unit), bụ mgbawa mmemme nwere ike ịme ụfọdụ iwu site na ebe nchekwa. Nke a nwere ike dakọtara na nkọwa nke CPU, ma n'ihe banyere MCU, ha anaghị adịkarị elu ma dị ike, na-elekwasị anya ụfọdụ ọrụ ụfọdụ, dị ka ngwaọrụ agbakwunyere.
Na mgbakwunye na ihe dị iche na CPU, microcontroller bụ eriri agwakọtara nke gụnyere CPU n'onwe ya, na mgbakwunye na nkanka ndị ọzọ na-arụ ọrụ dịka ebe nchekwa na usoro I / O. Echere m, ọ bụ ihu ọma kọmputa zuru oke n'otu mgbawa ...
Yabụ, ị ga - enweta ngwaọrụ dị ọnụ ala ma dịkwa mfe ị nwere ike mmemme nke mere na ntinye ya na ntinye ya na-eme dị ka ịchọrọ ma si otú ahụ na-emepụta omume. Nwere ike ime ka ọ nata ozi site na ihe mmetụta ma ọ bụ ndị na-eme ihe mpụga, ma dabere na nke ahụ na-eziga ụfọdụ akara site na npụta ya nye ndị ọzọ Ihe eletrọniki jikọọ
N'agbanyeghị, n'ihi na bido na Espurino IDE, ị gaghị awụnye ihe ọ bụla na sistemụ arụmọrụ gị, ọ bụ gburugburu ebe nrụọrụ weebụ ị nwere ike iji site ebe a na ihe nchọgharị weebụ kachasị amasị gị.
Ọ bụ ezie na enwere ike iji ihe nchọgharị weebụ dị iche iche, iji gbanye ngwa ngwa nke mbadamba ndị a, a na-atụ aro ka ị jiri Chrome na ngwa mgbakwunye akpọ Espurino Web IDE nke akwadoro site na gọọmentị weebụsaịtị yana ị nwere ike ịnweta Chrome gị njikọ a.
Ana m ekwu maka ya ihe ngosi vidio ahụ nke na enyere gi aka imuta ihe omume site na asusu mmemme, tinyere JS. Egwuregwu ndị a, kama iji keyboard ma ọ bụ òké iji duzie agwa ma ọ bụ na-emekọrịta ihe na gburugburu ebe obibi, ihe ị ga-enwe bụ onye ntụgharị okwu n'asụsụ a n'otu akụkụ ihuenyo na ebe ị ga-amalite itinye koodu (malite na mfe ọbụna ndị kasị elu).
N'ụzọ dị otú a, ị ga-ejikwa asụsụ mmemme jikwaa egwuregwu ahụ, yabụ n'oge egwuregwu gị ị ga-aga na-amụ ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịmata ya ma ka ị n’aga n’ihu na ozi gị ihe ọmụma gị ga-eto.
Mpempe akwụkwọ Espurino
Mgbe mbụ mmepe nke efere Ihe mbụ nke Espurino bịara karịa ọrụ ndị ọzọ enwere ike iji ya na IDE na JS. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ha, lee mmeghe nke ọ bụla:
Espurino (mbụ): ọ bụ efere mbụ, nke mbụ e mere n'okpuru ọrụ a. Njirimara ha bụ:
256Kb nke nchekwa nchekwa, 28Kb nke RAM
microUSB, njikọ SD, na JST PHR-2 njikọ batrị mpụga
Red, acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ LEDs
Pad na-enye ohere njikọ nke modulu Bluetooth HC-05
44 GPIO nwere 26 PWM, 16 ADC, 3 UARTS, 2 SPI, 2 I2C na 2 DACs.
22 GPIO (ntinye analog 9, 21 PWM, 2 Oghere, 3 SPI na 3 I2C).
USB-A njikọ na osisi.
2 LEDs na bọtịnụ 1 na PCB.
Ebe nchekwa: 384 Kb nke flash na 96Kb nke RAM
WiFi Spurino: Ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ejima abụọ na nke gara aga, naanị na agbakwunyela ụfọdụ mmelite. Dịka ọmụmaatụ, nha ya bụ 30x23mm, na-eto eto iji mepụta ohere maka mgbawa WiFi ESP8266. Na mgbakwunye, USB agbanweela microUSB, ọnụọgụ GPIO belatara 21 (8 analog, 20 PWM, 1 serial, 3 SPI na 3 I2C). N'aka nke ọzọ, microcontroller ebuliwokwa, ugbu a ọ bụ STM32F411CEU6 32-bit 100Mhz ARM Cortex-M4 nwere 512kb nke nchekwa nchekwa na 128 kb nke RAM.
Ekwentị Puur.js: Ọ bụ ihu ọma a Bluetooth smart bọtịnụ na ị nwere ike mmemme ekele ya esịtidem microcontroller na ọkọwa okwu (tupu-arụnyere) na JS. Na mgbakwunye, ọ nwere 52832Mhz ARM Cortex-M4 nRF64 SoC na 64kB nke RAM na 512Kb nke flash, GPIO, mkpado NFC, MAG3110 magnetometer, IR transmitter, thermometer arụnyere, yana ọkụ na ọkwa batrị batrị.
Uchenna Onyekwere: Ọ bụ a ngwaọrụ yiri nke gara aga, ma kama a button ọ bụ a programmable Bluetooth LE smart ihuenyo. Ihuenyo ya nwere akụkụ nke 128 × 64 monochrome, ebe njirimara ndị ọzọ dị ka Puck.js.
MDBT42Q: ọ bụ otu modul ahụ dị ka Pixl.js na Puck.js, mana ya na eriri seramiiki. Ihe ndị ọzọ e ji mara nkà na ụzụ dabara na abụọ ndị gara aga, mana na-enweghị ihuenyo ma ọ bụ bọtịnụ n'okwu a ...
Ọ bụrụ na ịchọrọ zụta ụfọdụ n'ime efere Espurino ndị a ị nwere ike ịhụ ha na ụlọ ọrụ gọọmentị webụsaịtị Site na oru ngo a. I nwekwara ike ịchọta ya site na usoro nke ndị na-ekesa ndị ọrụ kenyere ọrụ ahụ, dịka ụfọdụ ngwa ahịa ama ama dịka Adafruit, wdg.
openELEC: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụlọ ọrụ mgbasa ozi a
CAD: ihe niile gbasara komputa enyere aka na komputa